Deegaanka Dugsiga | Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Dugsiga Oakleigh waxaa la dhisay dhammaadkii 1950s. Tan iyo markaas, waxay soo martay sii socosho iyo dib u habayn joogto ah, balaadhin iyo dib u habeyn si loogu helo xarumo badan oo kaladuwan.
Waxaan u leenahay barkad biyo-ku-daaweynta carruurta yar-yar si ay u bartaan dabaasha iyo carruurta u baahan biyo-ku-daaweynta.
Iskuulku wuxuu leeyahay jawi jilicsan oo jilicsan oo lagu taageerayo Horumarinta Jirka, Isgaarsiinta, Isdhexgalka Bulshada iyo in la helo meel aamin ah oo lagu ciyaaro, iyo jawi dhib badan oo nabadgelyo leh carruurta da 'kasta iyo awood kasta leh.
Waxaan leenahay qol dareen leh codad badan oo soo jiidasho leh iyo astaamo iftiin leh si aan u taageerno kicinta iyo qiimeynta muuqaalka, iyo sidoo kale fursadaha wadaagga ciyaarta iyo isdhexgalka.
Waxaan sidoo kale leenahay hool hawleedyo kala duwan, oo loogu talagalay in lagu raaco mowduuca dugsiga, si kor loogu qaado khibradaha waxbarasho ee carruurta.
Waxaan haynaa qalab kaladuwan oo la wadaago si aan ugu soo bandhigno casharro ku saabsan manhajka dugsigeenna. Waxay awood u siinayaan baridda iyo barashada inay noqdaan kuwo dhiirrigeliya, u oggolaanaya carruurteenna inay ku faraxsan yihiin inay yeeshaan cod, iyo inay xukumaan bay'adooda. Kuwaas waxaa ka mid ah tikniyoolajiyadda indha-indheynta, u oggolaanshaha cunugga inuu helo kombuyuutar; gawaarida dareenka si loogu beddelo fasal kasta qol dareen ah; iyo mashruuc-dhismeedka sagxadda kaas oo sagxadda u rogaya meel ballaadhan oo is-dhexgal leh.
Fasallada, waxaa si wanaagsan loogu qalabeeyay qalab takhasus leh iyo qalab kale oo badan oo wax lagu baro dhammaan carruurta ku jirta dugsiga. Fasallada waxay leeyihiin shaashad ballaaran oo is-dhexgal ah oo plasma ah, oo ku xiran kumbuyuutar iyo softiweer ku habboon baahiyaha Waxbarashada Gaarka ah, iyo sidoo kale iPad-yada oo leh barnaamijyo kiciya. Halka fasallada habboon ay leeyihiin qalab isgaarsiineed oo dheeri ah, qaar adeegsanaya hadalka iyo sidoo kale beddelaadyo kala duwan si loo kordhiyo marinka ardayda ee manhajka.
Goobaha lagu cayaaro ayaa loo qaybiyaa EYFS, Furaha marxaladda 1 iyo 2 garoomada ciyaarta oo leh aagag ay ku jiraan qalab ballaadhan oo ballaadhan oo ballaadhan, astroturf, sagxadaha nabadgelyada iyo waddooyinka loo maro gawaadhida, bannaanka qalabka jimicsiga, aaladaha muusikada iyo lulidyada iwm.